ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်သူများ အတွ က် (၂၀၂၀ ဥပဒေသစ်) ထုတ်ပြန် လိုက်ပြီ – Let Pan Daily
ယာဉ်နံပါတ်မထင်ရှား =ကျူးလွန်သည့် ပုဒ်မ(၈၄-က) ။ အရေးယူသည့်
ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း. ထောင် သုံးလ #အခြားနံပါတ်တပ် =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ခ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ =ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်း.ထောင်သုံးလ။ ယာဉ်နံပါတ်ပြားမတပ်=ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ =ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း.ထောင်သုံးလ ။
ဝှီးတက်သက်တမ်းကုန် =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၀)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ =ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း.ထောင် တစ်လ။ #မောင်းလိုင်စင်မရှိ = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-က)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ =ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း .ထောင် တစ်လ ။ #တခြားသူ၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သုံး =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-ဂ)။ အရေး ယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ ။ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း . ထောင် တစ်လ ။
ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်း =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-င)၊ အရေးယူသည့် ပုဒ်မ ၉၁ =ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း.ထောင်တစ်လ ။ #မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးအရက်မူးလွန်းမောင်း =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-ဇ)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၉၁ =ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း .ထောင်တစ်လ #မောင်းလိုင်စင်မပါ = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၅-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၈၆ =ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း ။
မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းလွန် =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၅-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ- ၈၆ =ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း ။
မီးပိုတပ် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၅-ဆ)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၈၆ =ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း ။ #ယာဉ်မောင်းစဉ်ဖုန်းအသုံးပြု =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၅-ဋ) ။အရေးယူသည့်ပုဒ်-၈၆ =ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း ။ #ဘက်မှန်မပါ = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၆-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၈၇=ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း ။ ရှေ့မီးအနိမ့်နေ့/ည ဖွင့်မောင်းရန်ပျက်ကွက် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၆-ခ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၈၇ = ဒဏ်ငွေသုံးသောင်း ။
ပါဝါအိတ်ဇော အသံထိန်းမပါ =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၆-က)။ အရေးယူသည့် ပုဒ်မ ၈၇ =ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း ။ #ဦးထုပ်မဆောင်း =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၆-ဂ)။ အရေးယုသည့်ပုဒ်မ ၈၇= ဒဏ်ငွေသုံးသောင်း တို့ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ် (၄၄) မြို့နယ်နေ ပြည်သူများ အား ခရီးသွား လာခွင့် တားမြစ်